Sawiro:Urur goboleedka Igad oo olole lagu wacyi galinayo talaa... | Universal Somali TV
Sawiro:Urur goboleedka Igad oo olole lagu wacyi galinayo talaalka dabeysha ku qabtay Garissa
Dowlad goboleedka garissa ee gobolka waqooyi bari kenya ayaa maanta marti galisay xubno ka socdo dalalka ku bahoobay ururka Igad kaasi oo looga hadlay sidii loo sii wadi lahaa ololaha talaalka ee lagu ciribtirayo cudurka dabeysha.
Kulankaan ayaa waxaa goob joog ka ahaa wasiirada caafimaadka ee lixda dal ee xubnaha ka ah ururkan hey,ada dhalaanka iyo caruurta ee UNICEF, hey,ada caafimaadka aduunka ee (WHO) iyo xoghayaha urur goboleedka Igad.
Munaasabadaan oo ka dhacday jaamacada magaalada Garissa ayaa waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa dadweyne aad u fara badan iyadoo hogaamiye yaasha ay ugu baaqeen shacabka gobolka waqooyi bari kenya iyo kuwa geeska Afrika in caruurtooda ay ka talaalaan cudurka dabeysha.
Olalaha talaalka ayaa la filayaa in maalinta bari oo taariikhda ku beegan tahay 15 bisha September uu bilowdo waxaana uu socon doona ilaa 19 bishan.
Ismaamulada Garissa, Wajir, Marsabit, Mandera, Isiolo, Turkana iyo galbeedka Pokot oo dhaca waqooyiga kenya ayaa bartilmaameedku yahay in caruurta ku nool laga talaalo dabeysha.
Ololahaan ayaa sidoo kale ka bilaaban doona Somalia, Djibouti, Sudan, Uganda iyo Ethiopia.
Wasiirada caafimaadka ee dalka Dr. Fawziya Abikar Nur ayaa sidoo kale ka mid aheyd wasiirada caafimaadka ee dalalka Igad ee ka qeyb galay olalaha lagu ciribtirayo talaalka ee lagu daah furay maanta Magaalada Garissa.
Kan-xigaMichael Keating oo sheegay in mustaqb...
Kan-horeDagaal yahano ka tirsan shabab oo lab...
46,614,138 unique visits